Everestmission | हरपल खबर, निष्पक्ष विश्लेषण घट्टेखोला पुल शिलान्यास, 'भक्तपुरमा विकासको विरुवा रोप्ने हैन, फल खाने समय आयो': नेता बस्नेत
घट्टेखोला पुल शिलान्यास, ‘भक्तपुरमा विकासको विरुवा रोप्ने हैन, फल खाने समय आयो’: नेता बस्नेत
३० कार्तिक २०७८, मंगलवार १७:१६
भक्तपुर, ३० कार्तिक । नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य, पूर्वमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभाका सांसद महेश बस्नेतले जिल्लाको सूर्यवियनायक नगरपालिका वडा नं. ९ नंखेल स्थित भारआली घट्टेखोला पुलको शिलान्यास गर्नुभएको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेता बस्नेतले एउटै खोलामा चार वटा पुल एकै कार्यकालका जनप्रतिनिधिले शिलान्यास तथा उद्घाटन गरेको नगन्य इतिहास रहेको दावी गर्नुभयो । वडाले प्राथमिकता दिएका सडकहरुलाई उच्च प्राथमिकताका साथ प्रकृया अगाडी बढाएको उल्लेख गर्दै नेता बस्नेतले पलासेदेखी डोलेश्वरसम्मको सडक निर्माणको क्रममा रहेको बताउनुभयो । आन्तरिक तथा प्राकृतिक समस्याका कारण केही ढिला भए पनि यो वर्ष निर्माण सम्पन्न हुने उहाँले बताउनुभयो । प्राथमिकतामा रहेका पलासेदेखी काँक्राबारी जाने सडक, बासुकी मार्ग, खड्का गाउँ जाने र वडा कार्यालय जाने सडक, भातेढिकुरोदेखी नन्दिकेशर महादेवलगायतका सडकहरु रहेको जानकारी गराउँदै नेता बस्नेतले जनताको चाहना र आवश्यकता अनुसारको आयोजना सञ्चालन गर्न एमाले सरकारमा भए पनि नभए पनि कुनै समस्या नहुने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘आवश्यकता पुरा गर्न कुनै समस्या हुँदैन । विकासको गतिमा जनताले कुनै चिन्ता लिनु पर्दैन । नेकपा एमाले सरकारमा भए पनि नभएपनि भक्तपुरमा विकास हुन्छ । भक्तपुरले विकास खोज्ने नभई विकासले भक्तपुर खोज्ने अवस्था बनेको छ । वडाको माध्यमबाट योजना बनाउनुस् । बजेटको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा हाम्रो हो ।’
विगतमा भक्तपुरमा नेपाली कांग्रेस ठूलो शक्ति रुपमा रहेको समयमा भ्रष्टाचार, अनियमिता, भूमाफियालगायतका नेतृत्व कर्ता मात्र बनेको उल्लेख गर्दै नेता बस्नेतले अबका दिनमा जिल्लाको विकास र समृद्धिको नेतृत्वकर्ता एमालेको कुनै विकल्प नभएकाले कांग्रेसको अवस्था नगन्य मात्र भएको दावी गर्नुभयो । विकासका योजना काटेर जनताको मन जित्न नसक्ने उल्लेख गर्दै नेता बस्नेतले वर्तमान सरकाले देशभर तथा भक्तपुरका आयोजनाहरु काटेको प्रति आक्रोस जनाउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘भक्तपुरमा वर्तमान सरकारले काटेका ३१ वटा सडकहरुलाई पुनः ल्याउनु पर्नेछ, जसमा सरकारवादी दलहरुले पनि पहल गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । भक्तपुरमा महेश बस्नेतलाई प्रहार गर्न अर्थमन्त्रीमा भुत चढेको छ । सूर्यविनायक धुलीखेल सडकमा आएको दुई अर्व तथा अस्पताल निर्माण गर्नको लागि दुई अर्व बजेट काट्नुभएको छ । देशभर १४ सयवटा सडक काटेको छ । जसमा भक्तपुरमा मात्र ३१ वटा सडक वर्तमान सरकारले काटेको छ । विकासका योजना काटेर जनताको मन जित्न सकिदैन । मन जित्न त विकासका काम गर्नूपर्छ । भक्तपुरमा एमालेको नेतृत्वले विकास काटेर हैन, जनताको आवश्यकता र चाहना अनुसारका आयोजनाहरु सञ्चालन गरेर जनप्रीय बनेको छ ।’
भक्तपुरको विकास जनताले देख्ने र सुन्ने अवस्थामा नभई प्रयोग गर्ने अवस्थामा रहेको दावी गर्दै नेता बस्नेतले आफ्नो सरोकारको विषय आयोजना सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने मात्र भएको उल्लेख गर्नुभयो । विरोधीले विकासको लागि बजेट आफै आएको हो महेश बस्नेतले ल्याएको हैन भनि आलोचना गरिरहेको प्रति लक्षीत गर्दै उहाँले विगतमा आफ्नो नेतृत्वमा सिन्को भाँच्न नसक्नेले जनताको आँखामा छारो लगाउने कार्य नगर्न चेतावनी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘रुखबाट आँप फलिसक्यो । अब टिपेर खाने अवस्थामा पुगिसक्यो । खानेपानी तथा सडकमा भक्तपुरले अब आँपको रुख रोप्ने हैन, रोपेकोबाट फल खाने हो । जनतालाई आवश्यक पर्ने आयोजनाहरु करिव करिव तयार भइसकेका छन् । अव त्यसलाई सम्पन्न गरी जनताको तिव्र विकास प्रतिको चाहना पुरा गर्नुपर्छ । सडक बनाउने मेरो सरोकार हो । कतिमा सडकको ठेक्का परेको हो भन्ने मलाई था हुँदैन । घर बेचेर विकास गर्ने हैन । सरकारका तीन वटै तहका संरचना र सम्बन्धीत निकायबाट बजेट व्यवस्थापन गरी आयोजना सञ्चालन भएका छन् । हिजो कांग्रेसका नेताले के गर्यो ? उसको इतिहास के छ ? सरकारी जग्गा कसले कब्जा गर्यो ? भ्रष्टाचार कति भयो ? भन्ने लगायतका धेरै प्रमाणहरु हामीसँग छन् । तर हामी अहिले त्यो खोज्नेभन्दा पनि जनताको काम गरी आगामी दिन कसरी समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने भनने अभियानमा छौं ।’
उक्त पुल चार महिनाभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको वडाअध्यक्ष उपेन्द्रराज केसीको जानकारी दिनुभयो । वडाअध्यक्ष केसीका अनुसार उक्त पुल संघीय सरकारद्वारा विनियोजत रु ११ लाख ५४ हजार २ सय ७ रुपैंयाको लागतमा निर्माण शुरू गरिएको हो ।